Long evutha okuqinile fuel kubhayela: umthengi Izibuyekezo
Banikezwe izindleko okwandayo of coolants akuyona akumangalisi yokuthi izakhamuzi Cottages lizwe kuleli zwe kukhona njalo befuna enye Ukushisa indlela. Omunye walena uwukuba a kubhayela evutha okuqinile fuel eside. Izibuyekezo abathengi ibonisa ukuthi kulula ukufaka esikhundleni ngisho imishini igesi ngaphansi kwezimo ezithile.
Kuyaziwa ukuthi isimiso kuhhavini ezivamile awusekelwe kuphela yokuthi emoyeni hot kusukela ukhuni evutha heats indlu, kodwa nasekhonweni izitini yayo ithola ukushisa, akunika sona kancane kancane. Yingakho kuhovini fireplaces kunaleyo, kuphela amandla evutha fuel ngaphandle efaka ke.
Ukudala okuqinile fuel kubhayela inqobo omlilo izilinganiso okuyinto ukuheha ukunaka, abakhiqizi bakhumbula ukuthi kungenziwa behlukene ukhuni divalent carbon oxide (carbon monoxide evamile). It is kahle ovuthayo kanye unikeza omningi ukushisa. Ngaphezu kwalokho, lo mshini akusho bungakhiphi noma iyiphi izinto eziyingozi emkhathini, okuyinto ebaluleke for kulezo zindawo lapho ukungcoliswa komoya sekwande.
Izibuyekezo amakhasimende wanelisekile zibonisa ukuthi le ndlela umlotha kancane kakhulu futhi umule, nezinkuni izikhathi eziningana ezincane kuno uma babesebenzisa ngisho eliphezulu isitofu!
Kanjani lokhu yafinyelelwa?
Amamodeli, okuhlanganisa, isibonelo, isikhathi eside evutha okuqinile fuel boilers «Buderus», usebenza ku-scheme efanayo. Ekamelweni eliphezulu wabeka izinkuni. Akukona ufake emoyeni, ngakho isihlahla yi pyrolysis iguqulwe ibe carbon futhi okufanayo-carbon monoxide.
It uwela ekamelweni eliphakathi, lapho lokhelwa, kanyekanye ukwakha nenani elikhulu energy ezishisayo. Yiqiniso, ngenxa imikhiqizo amandla omlilo kukhona kuphela amanzi nesikhutha. Amakhasimende abafake lezi boilers, khuluma ngezinto isimo kuyadingeka ukuze ukusebenza kwabo, futhi komncane kunabo kushimula bakudala ukuthi akudingi yokuhlanza njalo.
Phela, lo ukushisa kusukela igesi omlilo ihlinzekwa hhayi kuphela Ukushisa izinjongo, kodwa futhi bome izinkuni impahla eluhlaza.
Kufanele digress bese ucoca egqugquzela ukuthi ibusa fuel okuqinile esivuthayo eside kubhayela. Izimpendulo eziqukethe ngayo ukwaziswa ingakhishwa esithandweni ngisho ezinye izinkuni, umswakama esingeqile ku-50%. Othile wavuma ngokuphindaphindiwe stoked "isitofu" yakhe, ngisho briquettes isigamu-wabhaka kusukela sawdust.
Nokho, bona laba bantu ngolaka waveza ukuthi kahle ngesikhathi esifanayo encishisiwe. Lokhu kungenxa nje okufanayo yokuthi iningi yokushisa okuvela omlilo of igesi ithatha isikhathi eside ngoba Ukushisa ukuze ome izinkuni. Ngaphezu kwalokho, le ndlela uqala ukwakha umlotha nakakhulu futhi umusi.
By the way, ungalokothi ukhohlwe isikhathi ukuhlanza "imfucumfucu." Uma lesi sitsha uye zanqwabelana umlotha kakhulu, i-traction evamile abakwazi ukulinda.
Yimaphi amanye amafutha ingasetshenziswa?
Ungacabangi ukuthi kubhayela omlilo Izibuyekezo okuqinile-eside, lapho iningi lawo omuhle, ungakwazi 'adle "izinkuni wedwa. Kungaba aphonse amalahle ngisho briquettes Peat.
Kodwa abasebenzisi abanolwazi saloluhlobo imishini zisikisela ukuthi inqubo pyrolysis ezifana fuel iya ezimbi, i-carbon monoxide kancane ikhishwe. Ngakho, ukushisa okukhipha futhi siba azinakwa.
Boiler amandla omlilo esiqinile eside, intengo zazo kuhluka ruble ayizigidi 7,5 infinity, ke angathengwa abantu abane izimo ezihlukile engenayo. Ngaphezu kwalokho, ukuchitha ambalwa xaxa ayizinkulungwane imodeli ezibizayo, usengakwazi ibuyisele le mali, esazikhokhela zikaphethiloli wake ngokuya eqolo.
Kanjani amasevisi ohlola
Kanjani ukuqinisekisa ukuthi umshini wokuwasha isetshenziswa isikhathi eside futhi njalo?
Isitofu Homemade kusukela isilinda igesi: imidwebo
Isixwa Sander: imodeli, incazelo, izici
Homemade ukugoba umshini
Pen: kuyini? Kungani usebenzisa ipeni?
Umthengi credit: ukubuyela kwesikhathi noma ngokuhambisana inkontileka?
Singakwazi yini ukuthinta amadoda esontweni izikhindi? Umbono nezifundo zenkolo, abapristi izimiso zokuziphatha ezivamile
Labor njengesizathu esinomthelela zokukhiqiza
Buckfast bee: incazelo kanye izici
Kungakhathaliseki namanabukeni abafana ezimbi? Izici ukusetshenziswa kanye nezincomo ochwepheshe
Izinyo impande canal: izici zokwelapha, izinkomba
Lezimanga Original sokuba namantombazane njalo
Alexandrite, garnet, itopazi hematite - amatshe olumangalisayo Scorpions-abesifazane!
I-Antenna yokuhlela i-tricolor eyenziwe ngezandla zomuntu siqu
Yuri Vardanyan: indaba yokuphila